Fanafihana teny Manakambahiny : jiolahy iray noraisim-potsiny tao anaty honahona | NewsMada
Fanafihana teny Manakambahiny : jiolahy iray noraisim-potsiny tao anaty honahona
Nidoboka eny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy, omaly ny iray amin’ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ny fanafihana Epi-bar teny Manakambahiny, ny alarobia teo. Saron’ny polisy misahana ny heloka bevava (BC) tao anaty honahona nandritra ny fifanenjehana ity jiolahy ity…
Nifanome tanana tamin’ny fanenjehana ireo jiolahy tompon’antoka tamin’ity fanafihana ity ny polisy avy ao amin’ny boriborintany faharoa Ambohijatovo sy ny polisin’ny BC, sakelika voalohany. Araka ny fanazavan’ny polisy, nitrangana fanafihana mitam-piadiana tao amin’io toeram-pivarotana io. Mpivarotra zava-pisotro ity niharan’ny fanafihana ity. Jiolahy miisa dimy tsy misaron-tava no indray niditra an-keriny tao an-trano tamin’io fotoana io. Nitondra basy ny telo raha nitondra sabatra kosa ny roa. Nandrahona ny tompon-trano sy ny mpanjifa izy ireo. Ny sasany nandeha teny amin’ny mpandray vola, ny hafa kosa naka baoritra ary nameno sy nandraoka ny entana izay zakan’izy ireo.
Tsy nanaiky lembenana anefa fa nitsoaka kiririoka ny tompon-trano. Nitsoaka tany an-tanimbary eny Ambohimiandra ambanin’i Manakambahiny izy dimy lahy. Tonga teny an-toerana fotoana taorian’izay ny polisy nampian’ny fokonolona tamin’ny fanenjehana ireo olon-dratsy. Latsaka tany anaty honahona ny iray tamin’ireo jiolahy ka noraisim-potsiny.
Nentina nanaovana fanadihadiana teny amin’ny polisin’ny BC ity jiolahy ity. Niaiky ny heloka vitany izy nandritra ny famotorana nataon’ny polisy. Mitohy ny fikarohana ireo jiolahy tafaporitsaka.